Nepali News Archives - Sagarmatha Online News Portal
रेडियो बजाउन तार काट्दा करेण्ट लागेर ५ घण्टा बेहोस भए : गायक बलबहादुर बाहिङ
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा स्थापित गायक, गायिकाहरु यो पेशाबाट पलायन हुने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । र यो क्षेत्रमा आउने युवापुस्ताका नव गायक, गायिकाहरुको लर्को पनि उत्तिकै छ । सञ्चार र प्रविधिले पछिल्लो समयमा पहिलेका ग...
मान्छे के ले बाँच्ने ?
जापानी उखान अनुसार, ‘बाघ मरेपछि छालाले बाँच्छ, मान्छे नामले ।’ त्यस्तै दार्शनिक तथा लेखक अज्ञातका अनुसार ‘शब्दसँग अर्थ हुन्छ, नामसँग शक्ति ।’ यति भनेपछि नाममा के त्यस्तो शक्ति छ ? जसका लागि मान्छेहरु मरिहत्ते गर्छन ? भन्नेबारेमा अरु बढी चर...
राष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आज राष्ट्रियसभाको अध्यादेश, नयाँ सरकार गठनलगायतका विषयमा भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सम्पन्न भेटमा राष्ट्रपति भ...
वर्षौंदेखि टुकीकै भरमा धनिकार बस्ती
महोत्तरी । चारैतिर आधुनिक बिजुली बत्तीले झलमल उज्यालो रहे पनि महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका–३ स्थित धनिकार बस्ती का बासिन्दा वर्षौंदेखि टुकीकै भरमा जीवन बिताउँदै आएका छन् । ३० घरपरिवार रहेको सो धनिकार बस्तीमा वर्षौंदेखि अँध्यारो रहेको...